Nagarik News - ओलीको बोलीसंग्रह
एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न मिति, मौका, प्रसंग र प्रकरणमा सार्वजनिक रूपमा बोलेका कडा, चर्का एवं रमाइला कुरा यस्ता छन्ः
– यो मानवसाङ्लो होइन, माखेसाङ्लो हो ।
– हामी नेपालीहरूमा नकारात्मक सोच छ । रूखमा दुईतीनवटा आँप झ¥यो भने बगैँचा नै रित्तियो भन्छौँ । वास्तवमा केही मात्र झरेका हुन् । त्यसले केही फरक पर्दैन ।
– ग्यासका सिलिन्डर काँधमा बोकेर, मोटसाइकलमा बोकेर हिँड्नु पर्दैन । सिलिन्डरको युग समाप्त गरिदिन्छु । घर–घरमा चुला–चुलामा पाइप पु¥याइदिन्छु ।
– भुरुरु धुवाँ छोड्ने डिजेलको बस होइन, इलेक्ट्रिक बस चलाउँछौँ ।
– हावाबाट बिजुली निकाल्ने काम सुरु हुँदै छ । एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ त्यसै भनेको छैन ।
– उपप्रधानमन्त्री धेरै भएर के बिग्रियो ? मन्त्रीका अगाडि एउटा पगरी गुथाइदिएको त हो । सांसद्को भन्दा मन्त्रीको दुई हजार बढी तलब हुने त हो ।
– अझै पनि कांग्रेस सरकारमा आउने हो भने मन्त्री घटाउन सकिन्छ । सानो मन्त्री मण्डल बनाऔँला । बेलायत, युरोपतिर उत्कृष्ट कहलिएका व्यक्तिहरू छन् क्यार ।
– बिहान सहमति हुन्छ, दिउँसो 'सहमति भएकै छैन' भन्नेलाई कुन डाक्टरले उपचार गर्ने ? के दबाई खुवाउने ? संविधान रोक्न बाहिर कता सिन्को, त्यान्द्रो भेटिन्छ, त्यसलाई मिलाएर मोर्चा बनाइएको छ ।
– नेवारी भाषामा एउटा उखान छ– 'माकः फुइँ (बाँदरले फुर्ती लगाउने)' भन्ने, त्यस्तै हो । बाँदरले हाँगा हल्लाउँदा रूख त हल्लिन्छ, तर यसपटक रूख (संविधानसभा) भाँच्ने सामथ्र्य राख्दैन । त्यहाँ एमाले बलियो शक्तिका रूपमा छ । यो संविधानसभाले संविधान जारी गर्छ ।
– झापामै बस्ने जनता चुप छन्, कञ्चनपुरबाट जितेको प्रतिनिधि चुप लागेर बसेको छ । अन्तैबाट कोही आउँछ र 'झापा त छाड्दै छाड्दिनँ, कञ्चनपुर त छाड्दै छाड्दिनँ' भन्छ ।
– जनता त्यति नबुझ्ने छैनन् । को संविधान बनाउन लागेको थियो, को बन्नै नदिन लागेको थियो भन्ने बुझ्छन् । गोलो घोचेर बिच्केको अरिंगाल त होइनन् नि जनता, जसलाई पायो त्यसलाई चिल्ने ।
– हावा भरिएको बेलुनजस्तो आकारमात्र ठूलो भएर हुँदैन, तौल पनि चाहिन्छ । रुकमांगद नामको छेस्कोले के घोचेको थियो, फ्यास्स हावा खुस्कियो । माओवादी छातेच्याउमात्रै हो, भदौको ठूलो थोप्ला पानीले नै ठेगान लगाउँछ ।
– वनमाराको झाडीमा पीपलको बिरुवा छोपियो भनेर पीपल हरायो भन्न मिल्दैन । एमाले पीपलको बिरुवा हो, माओवादी वनमाराको झाडी । पीपल रूख बनेपछि वनमारा आफैँ खुइलिएर जान्छ ।
– झुसिलेबाटै पुतली बन्ने भए पनि झुसिलेलाई पुतली भनिँदैन । झुसिले झुसिले हो, पुतली पुतली नै हो । हामी पुतली बनाएर छोड्छौँ । पुतली बनाएपछि पुतली भनौँला । अहिले झुसिले हो माओवादी, पुतली होइन । पछि वामपन्थी बनाउँछौँ भनेर उग्रवामपन्थी माओवादीलाई अहिले नै वामपन्थी भन्न मिल्दैन । जुन दिन हामी उसलाई रूपान्तरण गरेर वामपन्थी बनाउन सक्छौँ, त्यही दिन वामपन्थी भनौँला । हाललाई माओवादी वामपन्थी होइन ।
– दुई माना दूध उम्लेर एक पाथी जाने डेक्ची भरिएजस्तै हो माओवादी । दुई मानालाई एक पाथीको भ्रम परेको छ ।
– हात्ती दुब्लाएर बोरामा अट्दैन, मुसो मोटाएर हात्ती हुँदैन ।
– एउटा झोला किन्दे भनेर कसैले भन्यो भने झोला किनिदिन सकिन्छ । त्यतिले पुगेन, एउटा हात्ती पनि किनिदे भन्ला । त्यो पनि किनिदिन सकिएला । लौ अब त्यो हात्ती यो झोलामा हालिदे भनेर निहुँ खोज्यो भने के गर्ने ? मधेशको माग भनेको यस्तै हो ।
– सिनेमामा हिरोले हिरोइनलाई अँगालो हाल्छ, काखी च्याप्छ, हिरोइन आँशु झार्छे, एकअर्कालाई केही भयो भने पुर्पुरोमा हात राखेर रुन्छन् । जब सिनेमा सकियो केको लभ पर्नु ? हिरो एकातिर, हिरोइन अर्कैतिर । हामीले जति राम्रो बनाउन खोजे पनि एमाले माओवादीको सम्बन्ध त्यस्तै भयो ।
– गोरु नांगो देख्दा मलाई अहिलेसम्म लाज लागेको छैन ।
– खहरे आएका बेला ढुंगामुढा सबै बगाउँछ । खहरेको प्रभावमा परेर गरेको निर्णय गलत लाग्यो भने जनताले सच्याउँछन् । यो 'जनकरेक्सन' हो ।
– झुम्रा, कागज र अरू मटेरियल त पहिल्यै थिए, तर ती पहिल्यै थिए भनेर मैले पुतली बनाएँ भन्न मिल्दैन । जसले सबै मटेरियललाई मिलाएर पुतली बनाउन सिकायो, त्यो उसैले बनाएको भन्नुपर्छ ।
– माओवादीलाई सुधार्नु अप्ठ्यारो काम रहेछ । औषधि खुवायो, निल्दैन । एकछिन मुखैमा राख्छ, यताउति हेरेर ओकलिहाल्छ । अनि, हामी के गर्नु त ?
– गोगो साबुनको विज्ञापनमा भन्छ नि, 'गाईले पनि तिमीलाई लखेट्ने, कुखुराले पनि तिमीलाई नै लखेट्ने' भनेजस्तै एमालेजस्तो पार्टीलाई गाईले पनि लखेट्या छ, कुखुराले पनि लखेट्या छ । कुखुराको पनि ठूलो भाले होइन, चल्लाले लखेट्या छ । एमालेजस्तो पार्टीलाई अरूले गालामा चड्याम्म हान्छ, अनि 'कस्तो दुख्नेगरी हानेको सहन्नँ है म' भन्या छ ।
– जबजलाई कहाँ टीको लगाइदिनुपर्छ, कहाँ गाजल लगाइदिनुपर्छ, कहाँ लिपस्टिक लगाइदिनुपर्छ भनेर बहस गर्ने कि जबजले भनेअनुसार उग्रवामपन्थी र दक्षिणपन्थीविरूद्ध लड्न थाल्ने ?
– संविधानसभामा वामपन्थीको दुईतिहाइ बुहमत भनेर त्यसै छाती पिट्दै हिँडेर हुन्छ ? आफ्नो खेतमा खडेरी प¥या छ । त्यसमाथि त्यहीँ बाँदर पल्क्या छ । काकाको खेतमा धान फल्यो भनेर खुशी हुने ?
– बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्न सकिँदैन ।